192.168.1.254 Admin Banye | Rawụta Admin Banye & Tọgharia Paswọdu
rawụta Banye, Tọgharia, Password, IP Address Nkọwa
192.168.1.254 na-na onwe IP Address eji dị ka an-rawụta IP okwu maka ọtụtụ routers na Modem kọmputa. 192.168.1.254 Banye na-enye ohere na admin ka ịnweta, hazi na update ntọala. The IP 192.168.1.254 Ẹnịm iji na nkeonwe netwọk.
192.168.1.254 IP Address Admin Nbanye-enye gị ohere iji nweta gị ADSL rawụta. Ọ bụrụ na onye ọrụ kwesịrị iji nweta gị rawụta enweghị eji a waya, adreesị IP koodu 192.168.1.254 eme ka o kwe.
192.168.1.254 bụ onwe IP maka routers, Modem kọmputa, na broadbands na ọ pụtara nanị na ngwaọrụ n'ime nke a onwe netwọk ma ọ bụ IP ike a ga-enweta kpọmkwem site internet-eji nke a onwe IP, ma ọ bụla na ngwaọrụ ndị ọzọ na obodo netwọk njikọ nwere ike jikọọ ọ bụla na ngwaọrụ ndị ọzọ na-na na na netwọk.
E nwere ụfọdụ routers na modem ụdị gụnyere Linksys routers na Modem kọmputa, Westell DSL Modem kọmputa, Alcatel Modem kọmputa, 3Com routers, na Modem kọmputa, Ijeri routers na Modem kọmputa na ọtụtụ ndị ọzọ ika routers nke na-emekarị na-eji 192.168.1.254 dị ka ndabere IP okwu maka routers.
abanye n'ime 192.168.1.254 IP Address
A ọrụ pụrụ nanị mezue 192.168.1.254 Nbanye nzọụkwụ site na-eso nzọụkwụ.
nzọụkwụ: 1- Jikọọ gị PC ma ọ bụ ngwaọrụ na rawụta netwọk site Ethernet USB ma ọ bụ site na Wi-Fi.
nzọụkwụ: 2- Mepee ọ bụla nke nchọgharị gị PC na ụdị URL http://192.168.l.254 na ihe nchọgharị gị.
nzọụkwụ: 3- Tinye ndabere rawụta aha njirimara na paswọọdụ n'ụzọ ziri ezi ma ị ga-adị gị rawụta IP address 192.168.1.254.
Kasị routers na ndabere IP Address of 192.168.1.254 eji na aha njirimara na paswọọdụ “admin“. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị chefuru gị rawụta na aha njirimara na paswọọdụ mgbe ị pụrụ enyemaka nke 192.168.1.254 Nbanye na ike tọgharịa rawụta.
Gịnị ma ọ bụrụ na Echefuru m Password?
Kwụpụ-1: Gbanyụọ ma ọ bụ Gbanyụọ rawụta ị na-eji.
Kwụpụ-2: Pịa ma jide nrụpụta button na azụ panel maka 5 ka 10 ma ọ bụ 15 sekọnd na a top kwuru pin ma ọ bụ na a compass ma ọ bụ na a agịga na n'otu oge Malitegharịa ekwentị ma ọ bụ gbanye rawụta.
nzọụkwụ- 3: ugbu a, hapụ nrụpụta button na-eche maka ngwaọrụ reboot.
nzọụkwụ 4: ugbu a, ị ga-enwe ike jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa gị rawụta site Ethernet network USB ma ọ bụ site na iji Wi-Fi njikọ.
nzọụkwụ 5: Jikọọ na netwọk na gị rawụta na-tọgharịa ugbu a.
M anya na a post enyeworo gị aka zuru 192.168.1.254 Banye kwụpụ na mezue 192.168.1.254 Admin Banye nzọụkwụ. Ọ bụrụ na ị ka nwere nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ihe isi ike mgbe ikwu n'okpuru na ka anyị mara. N'ihi na ihe banyere 192.168.1.254 IP Address, ileta ukara website ugbu a.
192.168.1.254 gbanwee okwuntughe192.168.1.254 Tọgharia Paswọduhttps://192.168.1.254 Banye
Previous Post:Linksys rawụta Banye & Linksys rawụta nhazi Guide